Ukuqhekeka koLungiso kunye ne-Intramedullary Nail
Yintoni endidinga ukuyazi malunga nokulungiswa kwe-intramedullary nail fracture fixation?
Ukulungiswa kwembambo yesipikili kukuhlinzwa ukuze kulungiswe ithambo elaphukileyo kwaye kuligcine lizinzile. Amathambo aqhelekileyo alungisiweyo asebenzisa le nkqubo ngamathanga, i-shin, i-hip, kunye namathambo engalo ephezulu. Isikhonkwane okanye intonga esisigxina ibekwa embindini wethambo. Kuya kukunceda ukuba ukwazi ukuthwala ubunzima kwithambo.
Ngaba i-amoxicillin inokunyanga usulelo lwegwele
Ndizilungiselela njani ukwenza uqhaqho?
Ugqirha wakho uza kukuchazela indlela yokulungiselela ukwenza utyando. Musa ukutya okanye usele emva kobusuku ngemini yotyando lwakho. Izokuxelela ukuba ngawaphi amayeza onokuwathatha ngosuku lotyando. Uya kunikwa isibulali zintsholongwane nge-IV yakho ukukunceda uphephe usulelo lwebacteria.
Kuza kwenzeka ntoni ngexesha lotyando?
Unokunikwa i-anesthesia ngokubanzi ukuze uhlale ulele kwaye ungabinazintlungu ngexesha lotyando. Uya kuthi unikwe iyeza lokuthintela iintlungu kwimithambo-luvo ekufuphi nendawo yotyando. Iyeza elibuthathaka linokujojelwa kumqolo wakho ukuba unethambo emlenzeni wakho. Uyakuvuka xa unenaliti emqolo, kodwa awuyi kuva zintlungu.
Olu tyando luhlala lusenziwa ngokucheba okuncinci kulusu. Ugqirha wakho uza kufaka ucingo olukhokelayo embindini wethambo. Kuya kufuneka usebenzise isixhobo ukusika ithambo. Emva koko uya kulungelelanisa iziphelo ezaphukileyo zethambo. Isikhonkwane sifakwa kwinxalenye yethambo ukugcina amathambo elungelelanisiwe. Amantongomane asetyenziswa kwiziphelo zombini ukubamba isikhonkwane endaweni. Izititshi zotyando okanye ukutya okusetyenziswayo kunokusetyenziselwa ukuvala ukusikwa.
Kuza kwenzeka ntoni emva kotyando?
Imilenze yakho inokuba ilele kangangeyure ezi-6 ukuya kwezi-12 emva kotyando ukuba ubunokufumana inaliti yomnqonqo. Unokudumba kunye nentlungu emlenzeni wakho kuqhaqho. Oku kuqhelekile kwaye kufuneka kuphuculwe kwiintsuku ezimbalwa. Unokunikwa iyeza lokunciphisa iintlungu kunye nokudumba.
Kuya kufuneka uhambe kancinci usuku lotyando lwakho okanye usuku olulandelayo. Oku kuya kunceda ukuthintela amahlwili egazi. Ikwaxhasa ubunzima kwithambo. Ukuthwala ubunzima kubalulekile ukomeleza ithambo. Kuya kufuneka ulinde ithambo ngaphambi kokuba ubeke ubunzima bakho kuwo. Oogqirha banokukuxelela ukuba usebenzise iintonga okanye ezinye izixhobo zokuxhasa.
Ukuzilolonga ngokuphefumla nzulu Banceda ukuvula iindlela zakho zomoya kwaye banciphise umngcipheko wosulelo lwemiphunga. Thatha umoya omninzi kwaye ubambe umoya kangangoko unakho. Khupha wonke umoya kwaye emva koko ukhohlele nzima. Inkuthazo yespirometer inokubonelelwa ukukunceda uthathe umphefumlo onzulu. Beka umlomo weplastiki emlonyeni wakho kwaye uthathe kancinci, uphefumle nzulu, emva koko uphefumle kwaye ukhohlele. Yenza imithambo amaxesha ali-10 ngeyure nganye.
Ucinezelo iikawusi ziya kusetyenziswa ukonyusa ukuhamba kwegazi kunye nokuthintela amahlwili. Sisitokhwe eside nesincinci. Ibeka uxinzelelo emilenzeni kwaye inceda ukubuya kwegazi kwimithambo yemilenze esezantsi. Uya kuthi kwakhona unikwe amayeza okucoca igazi ukunceda ukuthintela amahlwili egazi.
Ingcali yonyango ingakufundisa imithambo yokunceda umlenze uphile. Ukuzivocavoca kunokunceda ukomeleza izihlunu zakho kwaye ugcine amalungu akho ebhetyebhetye.
Yeyiphi imingcipheko yokulungiswa kwesipikili sokuqhekeka?
Unokuba neempendulo ezichasayo kwi-anesthesia okanye kwi-antibiotics. Uyakwazi ukuphuhlisa isifo secandelo. Le yimeko ekhulayo xa uxinzelelo oluninzi lusakha ngaphakathi kwezihlunu. Igazi alinakuhamba kwimisipha nakwizihlunu. Oku kunokubangela ukonakala kwemisipha kunye nemithambo luvo esisigxina.
Ukuqhekeka kwakho kuya kuphulukisa kwimeko engaqhelekanga. Iingcebiso zokophuka zisenokungahlangani ngokufanelekileyo. Oku kunokuthintela ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Isikhonkwane okanye isikrufu sinokugoba okanye kungasebenzi. Uya kudinga utyando kwakhona ukuba oku kuyenzeka. Unokuba nomonakalo wemithambo okanye yegazi. Umonakalo unokubangela ukuphazamiseka kwethutyana okanye okusisigxina. Unokuba nakho ukucaphuka kwindawo apho zibekwe khona izikrufu.
Ndingayithatha itylenol nge-amoxicillin
uthumela njani kwiqela le-facebook
yintoni ubuninzi bendawo
ngaphezulu kwonyango lwe-molluscum
zingaphi benadryl ukuthatha
ukumisa njani ukutsha kwe monistat
Chonga iwizard yepilisi
i-minecraft indlela yokwenza idayi emfusa